व्यापारमा कोरोना, विद्यार्थीलाई पीर (भिडियोसहित) « Janata Samachar
व्यापारमा कोरोना, विद्यार्थीलाई पीर (भिडियोसहित)
प्रकाशित मिति : फाल्गुन २६, २०७६ सोमबार
काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सीमा नाकामा कडाई गरेको छ । रक्षा मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सीमा नाकामा क्वारेन्टाइन भवन निर्माण तथा क्रसबोर्डर मिटिङ सँगै हेल्थ डेस्क बढाउने निर्णय गरेको छ । चीनबाट फैलिएको कोरोना विश्वभर आतंकको उडान भरिरहेको छ । खुला सिमाना भएको छिमेकी मुलुकमा समेत कोरोना देखिएकाले विमानस्थल र सीमामा सरकारले सुरक्षा गस्ती बढाएको हो ।
सीमामा आवागमन कम गर्ने, निकासी नियन्त्रण गर्ने, मास्क र औषधि आपूर्तिमा समस्या पर्न नदिने गरी उत्पादन बढाउने, भारतबाट औषधि तथा अत्यावश्यक सामग्री आयात गर्ने लगायतका निर्णय गरिएको हो । बैठकले स्वास्थ्य परीक्षण सहज बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रायलाई निर्देशन दिनुका साथै विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई कोरोना संक्रमण छिटो हुनसक्ने भएकाले छिटो परीक्षा सम्पन्न गराउन निर्देशन दिइएको हो । सरकारी तयारी तीब्र देखिन्छ । सरकारले सर्वसाधारणलाई सुरक्षित रहन आफ्ना गतिविधि बढाउँदा मुलुकमा यसको अनर्गल प्रचार बढिरहेको छ । त्यही कारण दैनिक उपभोग्य सामग्री समेत अभाव देखाइएको छ । नेपाललाई कोरोनाको उच्च जोखिममा राख्दै उच्च सतर्कता भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुझाव दिएपछि मुख्यगरी मास्क अभाव देखाइएको छ । औषधि पसलमा ‘नो मास्क’बोर्ड टाँसिएको भेटिन्छ ।
सर्वसाधारणमा त्रास बढिरहेको छ । विश्वका ८१ भन्दा बढी देशमा कोरोना संक्रमण फैलिँदा ९५ हजार बढी मानिस संक्रमित छन् । यसैगरी, ३ हजार २ सय मानिसको मृत्यु भएको छ भने ५३ हजार २ सय ७६ जना मानिस संक्रमण भएर पनि निको भएका छन् । यसैगरी, अहिले बजारमा ग्यास, औषधि र अन्य विभिन्न सामान अभाव भएको अनर्गल प्रचार भइरहेको छ । सरकारले यसरी संकटमा गलत फाइदा लिन खोज्ने व्यापारीलाई कारवाही गर्ने र यसका लागि सर्वसाधारणलाई सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ । यता, एसइइ नजिकिँदै जाँदा परीक्षा कसरी दिने भन्ने पिरमा विद्यार्थी छन् । सरकारका सूचनालाई गलत प्रचारबाजी नगर्न आव्हान गरिएको छ । उता, ग्यासको लाइनमा सर्वसाधारण छन् । ग्यास सकियो भने के गर्ने ? सर्वसाधारण महंगोमा ग्यास किनिरहेका छन् ।
कोरोना प्रभावले विश्वको आर्थिक बजार थला परेको छ । विश्वका एकदमै विकसित मुलुकहरुको अर्थतन्त्रसमेत धराशायी भएको छ । नेपाली श्रमिकको ठूलो संख्याले रोजगारी गुमाउन सक्ने भयसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि नराम्ररी प्रभावित बन्नसक्ने खतराका संकेतहरु देखिएका छन् । पूर्व तयारी नहुँदा विश्व स्वास्थ्य संगठनले अति जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा नेपाललाई राखिदियो । नेपाल आफैँमा चीनको छिमेकी मुलुक, सतर्कताको अवस्था प्रभावकारी नबन्नु, कोरोना भित्रिन नदिने कमजोर संयन्त्र तथा भित्रिहाले के गर्ने भन्ने बलियो पूर्वतयारी नहुँदा विश्व स्वास्थ्य संगठनले उच्च जोखिममा नेपालको नाम राखेको हो । कोरोना फैलिहाले एक किसिमको विपद् नै निम्तिने भय जीवितै छ । राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्रको गफ ठूला छन्, तयारी झिनो छ ।
हुन त सरकारले कुनै जोखिम छैन भनिरहेको छ । अनि त्रास पनि बाँडिरहेको छ । चैत ५ गतेभित्र कक्षा नौसम्मका विद्यार्थीको परीक्षा सक्न निर्देशन दिइसकिएको छ । कोरोना संकटको असर नेपालका मुख्य श्रम गन्तव्य कोरिया, मलेसिया, कतार, जापानलगायत मुलुक उत्तिकै जोखिममा छन् । ती मुलुकका नेपाली घर फर्कन चाहन्छन् । सरकारले चीनको उहानमा रहेका नेपालीको उद्धार गरेजस्तै ती मुलुकमा पनि सम्भावित संकट सामना गर्न सबै संयन्त्र तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । श्रम गन्तव्यमा रहेका नेपालीको आर्थिक अवस्था चीनमा रहेकाको भन्दा कमजोर छ । सरकार अभिभावक बन्नु पर्नेछ । त्यो बेला ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्नेछन् । अर्कोतिर ती मुलुकबाट फर्कन सक्ने ठूलो संख्याका नेपालीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने स्थान अभाव हुनेछ । यसका लागि आन्तरिक तयारी खोई ?
कोरोनाको असरले विकसित मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी बनिरहेको छ । श्रम गन्तव्यबाट नेपाली फर्कन्छन्, रेमिट्यान्स घट्छ भन्ने अनुमान भइरहँदा फर्किएका नेपालीले सिकेको सीप र श्रमलाई उपयोग गर्ने नीति लिएर देशका बाँझो खेतबारी हराभरा बनाउन लाग्नुपर्ने देखिन्छ । आन्तरिक खपतलाई ध्यान दिंदै कृषि उत्पादन बढाउने हो भने आयात प्रतिस्थापनमा सहयोगसमेत हुनेछ । कोरोनालाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका उचित मौकाको रुपमा लिएर राज्यले बेलैमा ठोस योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ ।